यो सरकार किन बोल्दैन ?
राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको ताजा अभिव्यक्ति सुनौं– माग सम्बोधन नभए मधेसले छुट्टै देश माग्न सक्छ ।
संविधानले यो हदसम्मको छुट दिएको छ ? छैन भने किन उनको मुख थुन्न सक्दैन संविधान ? असोज ३ गते वीरगञ्जको घण्टाघर चोकमा आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै महन्थ ठाकुरले यसै भने, संविधान सुनिरह्यो ।
२ नम्बर प्रदेश हो, जहाँ भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष मुख्य मन्त्रीले नै उजुरी गरे । प्रधानमन्त्री हेरिरहे, सुनिरहे । अव त्यही प्रदेशमा मृत संविधानको पुनर्जीवन खोज्न नसकिने अवधारणा राखेका छन् । र, यो संविधान कालो संविधान, कालो संविधान दिवस भनेर मधेशका नेतामात्र होइन, त्यही संविधानको सपथ खाने मुख्यमन्त्रीले समेत बिरोध गरे ।
असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन, वीरगन्जमा आयोजित ‘नेपालको संविधान २०७२ मा जनताको अवधारणा’ विषयक कार्यक्रममा नामी लेखक खगेन्द्र संग्रौला समेत पुगे । उनले संविधानको विरोध गर्नेलाई विखण्डनकारी भनिन्छ तर जसले यो संविधान जारी गर्‍यो तिनीहरु नै विखण्डणकारी भएको बताए । उनले मधेसीको रगतमा लगपतिएको संविधानमा संशोधन नगरेसम्म यसले पुनर्जीवन नपाउने धारणा राखे । तर संग्रौलाजस्ता शिद्धहस्त लेखकले सीके राउतले मधेश नेपाल होइन, आधुनिक नयाँ देश हो मधेश भनेर जनकपुरमा गरेको आमसभा, घोषणा र राजपाको समेत सहभागितालाई केही भनेनन् । त्यो बिखण्डन थियो कि थिएन, सीके राउतको हर्कत नेपालवादी थियो कि संविधानवादी ? संविधानमा बिमति राख्न पाइन्छ, नेपालमा बसेर अखण्डतामा बिमति राख्न पाइन्छ कि पाइन्न खगेन्द्र संग्रौला, महन्थ ठाकुर अथवा राजपाका नेताहरु किन भन्दैनन् ?
यता सी के लालले समेत फाष्ट ट्रयाकको नाममा हतारमा संविधान जारी गरेर मृत बच्चा पैदा भए सरह संविधान आएकाले सबैलाई सर्वस्वीकार्य हुन नसक्ने विचार राखे । उनको यो विचारको खण्डन गर्न जरुरी छैन, विचार राख्न पाइनछ । संविधानमा बिमति राखेर संशोधनको माँग पनि गर्न पाइन्छ । तिनै सीके लालले ठूलो अखवारमा मधेश नेपालमा टाँस्सिरहन सक्दैन भनेर किन लेखे ? त्यो विचारप्रति खगेन्द्र संग्रौलाको सहमति छ ? छैन भने बिखण्डन र संशोधनको माँगको वीचमा कुनै साइनो छैन । बिखण्डनवादी नेपालवादी हुनैसक्दैन, त्यस्तालाई देशभक्त मान्न पनि सकिन्न । सत्य यही हो । कुनै पनि मुलुकमा यस्तो बोल्ने, हर्कत गर्ने छुट दिइन्छ ?
हो, सांसद प्रदीप यादवले भनेजस्तो संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने आशामा फोरम सरकारमा गएको तर मधेसको माग सम्बोधन नभए दसैं, तिहार लगत्तै पार्टीले मन्त्री फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए । सकिन्छ, नेपाली भएर हक, अधिकार माँग्न सकिन्छ, मधेस मिडिया फाउन्डेसनका तुला नारायण साहले तीन ठूला दलका खस आर्य समूहका सांसदको स्वार्थमा संविधान जारी गरीएकाले मधेसी, दलित, जनजातिको अधिकार संविधानमा समेटिएन भने, यसमा पनि सहमति जनाउन सकिन्छ ।
बहस हुनुपर्छ । मधेशमात्र होइन, सबै जातजाति, क्षेत्रको अधिकार संविधानमा समेटिएको छ कि छैन, बहस गर्नुपर्छ । नेपाल कसरी समुन्नत बन्छ, यही यस्तै बहसबाट बन्छ । देश टुक्य्राइदिन्छु, नयाँ देश बनाइदिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति देशभक्तिपूर्ण छैन, जसले भन्छ, त्यो बिखण्डनवादी नै हो । त्यस्तालाई कुनै नेपालीले समर्थन दिनसक्दैन ।
नागरिक अभियन्ता डा.सुन्दरमणी दीक्षित समेत वीरगञ्ज पुगेका थिए । एउटा असल डाक्टर, सधैं असल कुरा बोल्थे, उनले मधेस कमजोर भए समग्र नेपाल पनि कमजोर हुने भएकाले उनीहरुको मुद्दा सम्बोधन गर्न दुई तिहाईको सरकार उदार हुनैपर्ने बताए । यसका लागि फोरम र राजपा पनि एक जुट हुनैपर्छ नभए शासकहरुले खेल्ने मौका पाउँछन् भन्ने सुझाव दिए । यो सुझावलाई पनि बिरोध गर्न जरुरी छैन । डाक्टरले रोग चिनेर उपचारको बिधि बताउने हो ।
महन्थ ठाकुरले मधेशका लागि अन्तिम समयसम्म लड्ने प्रतिज्ञा गरे, लड्नुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रको विकास र अधिकारका लागि लड्नुपर्छ । मधेश टुक्य्राइदिने अतिवादी सोच, अराष्ट्रिय भनाइबाट पन्छिएर मधेशको हकमा लड्नु उनको बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा हो । माग सम्बोधन नभए मधेसले छुट्टै देश माग्न सक्छ, मधेश अलग देश बन्छ भन्नेजस्ता काँचो कुरा नगर्दा उनको परिपक्वता नै झल्किन्छ ।
महाभारतमा पाण्डवले पाँच गाउँ माग्दा कौरवले पुरै राज्य नै गुमाउनु परेको थियो, यदि मधेसका माग र असन्तुष्टि समयमै सम्बोधन हुन सकेन भने मधेसले छुट्टै देशको पनि माग गर्न सक्छ । यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालमा खुनखरावामात्र निम्त्याउनेछ । अधिकार माँग्न पाइन्छ, नयाँ देश माँग्ने छुट कसैलाई छैन । सधैं नेकपाको जस्तो कमजोर सरकार रहदैन । कुनै बेला देशभक्त सरकार पनि बन्छ जसले जनतालाई अधिकार त दिन्छ तर यस्तो गर्ने दिनेको मुखमा बुजो हाल्छ हाल्छ ।